Gosiputa onwe gi na ulo otele, jiri odibo odibo, weta umu gi!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Gosiputa onwe gi na ulo otele, jiri odibo odibo, weta umu gi!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ na -agbasa ozi China • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ị nwere ike ịhụ ụlọ nkwari akụ a n'anya. Njikwa chọrọ ịnye gị ahụmịhe dị iche. Ọ na -atụ aro ka ị nọrọ onwe gị n'ụlọ ọgwụ. A na -anabata ịkwa iko. Ụlọ nkwari akụ ahụ nwekwara ndị nọọsụ nwere nka nke ukwuu na mgbede iji debe ụmụ gị. Ka emechara ụlọ nkwari akụ a dị na Beijing bụ enyi na enyi.
Mgbe ị hapụrụ ụlọ nkwari akụ anyị na ngwụsị ezumike gị, ị gaghị enwe olileanya! A na -agba ịkwa iko ume.
COVID gbanwere njem na njem nlegharị anya, gụnyere ụlọ oriri na nkwari akụ, gụnyere ụlọ ọrụ ọbịa niile.
Kedu maka obere mkpughe na ụlọ oriri na nkwari akụ. Kpọta ụmụ gị maka ịkwa iko dị mma. Nke a nwere ike ime naanị na China, ka nke a furu efu na ntụgharị?
Site n'ụdị afọ anyị niile nọ na gburugburu ụwa, mgbe ụfọdụ soshal midia nwere ike weta mgbapụ anyị niile chọrọ na njedebe ụbọchị.
COVID agbanweela ụlọ ọrụ ile ọbịa. Kedu onye na -ekwu na mgbasa ozi mmekọrịta adịghị mma maka ihe ọ bụla belụsọ ndị na -achọ ire onwe ha n'ụzọ ụfọdụ, ọdịdị, ma ọ bụ n'ụdị?
Ebe a na-aga…
Otu enyi gara Beijing n'oge na -adịbeghị anya ma ụlọ nkwari akụ nyere ya broshuọ a. Ọ dị oké ọnụ ahịa. Ọ na -edebe ya ma na -agụ ya oge ọ bụla ọ chọrọ ezigbo ọchị. N'ụzọ doro anya, a tụgharịala ya ozugbo, okwu maka okwu, site na Mandarin gaa na Bekee.
Therega ebe ahụ
Onye nnọchite anya anyị ga -eme ka ị chere n'ọdụ ụgbọ elu. Ụgbọ ala na -aga na họtel na -aga n'akụkụ ọdọ mmiri. N'oge na -adịghị anya, ị ga -enwe obi ụtọ n'ịgafe mmiri. Ị ga -amara na ị na -abịaru ụlọ nkwari akụ ahụ nso, n'ihi na ị ga -aga gburugburu gbagọrọ agbagọ. Onye njikwa ga -echere gị n'ọnụ ụzọ mbata. Ọ na -agba mbọ mgbe niile ka ya na ndị ọbịa ọhụụ nwee mmekọahụ.
Nke a bụ ụlọ nkwari akụ ezinụlọ, yabụ a na -anabata ụmụaka. Anyị na -enwekarị obi ụtọ ịnabata ịkwa iko. Ndị nọọsụ nwere nka nke ukwuu dị na mgbede iji debe ụmụ gị. A na -akpọ ndị ọbịa ka ha sonye na mmanya wee kpughee onwe ha ndị ọzọ. Mana biko mara na ekweghị ka ụmụ nwanyị mụọ nwa n'ime ụlọ mmanya. Anyị na -ahazi egwuregwu mmekọrịta, yabụ na ọ nweghị onye ọbịa hapụrụ naanị ya ka ya na ya gwuo egwu.
Lọ oriri na ọtaụ Resụ
Ejirila nlezianya họrọ menus anyị ka ọ bụrụ nke nkịtị na enweghị atụ. Na nri abalị, quartet anyị ga -ekesa site na tebụl ruo na tebụl wee soro gị nọrọ.
Ime ụlọ gị
Ụlọ ọ bụla nwere ọmarịcha akụrụngwa maka akụkụ nzuzo gị. N'oge oyi, ụlọ ọ bụla na -ekpo ọkụ. Ime ụlọ ọ bụla nwere mbara ihu nke na -enye echiche nke omume rụrụ arụ pụtara ìhè! Mkpọtụ okporo ụzọ agaghị enye gị nsogbu ebe ọ bụ na ụzọ dị n'etiti ụlọ nkwari akụ ahụ na ọdọ mmiri a na -eji naanị pederasts eme ihe.
Emebere akwa gị dịka omenala obodo siri dị. Ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla ọzọ, biko kpọtụrụ onye na -elekọta ụlọ. Biko jiri ya mee ihe. Ọ ga -enwe obi ụtọ ịzọpịa uwe elu gị, uwe elu nwanyị na uwe ime gị. A jụọ ya, ọ ga -afanyekwa uwe ogologo ọkpa gị.
Mgbe ị hapụrụ anyị na ngwụcha ezumike gị, ị gaghị enwe olileanya. Ọ ga -esiri gị ike ichefu ya.
Yabụ, ị na -eme atụmatụ nke gị njem na Beijing?